28 “Pane nzvimbo inowanika sirivhaNenzvimbo yendarama yavanonatsa;+ 2 Simbi inotorwa muguruva+Uye mhangura inodururwa ichibva mudombo. 3 Akatara panogumira rima;Uye kumigumo yose ari kutsvaka+Matombo murima nomuzarima. 4 Anochera mugodhi kure nokunogara vanhu vari vatorwa,+Munzvimbo dzakakanganwika dziri kure netsoka;Vamwe vanhuwo zvavo vanodzika pasi vakarembera, vanozeya uku nokoko. 5 Kana iri nyika, zvokudya zvinobuda mairi;+Asi pasi payo, yakashandurwa sokunge kuti nomoto. 6 Matombo ayo inzvimbo yematombo anonzi safaya,+Uye ane guruva rendarama. 7 Nzira yacho—hapana shiri inodya nyama+ inoiziva,Uye hapana ziso rengavi nhema+ rinoiona. 8 Haitsikwi-tsikwi nezvikara zvikuru;Haifambwi neshumba duku. 9 Anotambanudzira ruoko rwake kudombo rakaoma kwazvo;Anoparadza makomo kubvira pamidzi yawo; 10 Anochera migero yakazara mvura mumatombo,+Uye ziso rake rinoona zvinhu zvose zvinokosha. 11 Anodzivira nzvimbo dzinobudisa mvura inoyerera munzizi,+Uye anobudisa chinhu chakavanzwa achichiisa pachiedza. 12 Asi uchenjeri—hungawanikwa kupi?+Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 13 Munhuwo zvake haazivi mutengo wahwo,+Hahuwaniki munyika yevapenyu. 14 Mvura yakadzika inoti,‘Hahusi mandiri!’Gungwawo rinoti, ‘Hahusi mandiri!’+ 15 Ndarama chaiyo haigoni kuchinjaniswa nahwo,+Uye sirivha haigoni kuyerwa kuti ive mutengo wahwo. 16 Hahungatengwi nendarama yokuOfiri,+Nedombo reonikisi risingawanzowaniki kana nesafaya. 17 Ndarama negirazi hazvingaenzaniswi nahwo,Uyewo hapana chero mudziyo upi zvawo wendarama yakanatswa ungachinjaniswa nahwo. 18 Dombo rekorari+ nedombo rekristaro haazotaurwi nezvawo,Asi homwe izere nouchenjeri inokosha kupfuura izere nemaparera.+ 19 Topazi+ yokuKushi haingaenzaniswi nahwo;Hahugoni kutengwa kunyange nendarama yakanatswa. 20 Asi uchenjeri—hunobva kupi?+Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 21 Hwave hwakavanzirwa maziso omunhu wose mupenyu,+Uye hwave hwakavanzirwa zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga. 22 Kuparadza norufu zvinoti,‘Takanzwa mashoko pamusoro pahwo nenzeve dzedu.’ 23 Mwari ndiye anonzwisisa nzira yahwo,+Ndiye anoziva nzvimbo yahwo, 24 Nokuti iye anotarira kumigumo yenyika;+Anoona zviri pasi pematenga ose, 25 Kuti ayere kurema kwemhepo,+Paanoyera mvura nechiyero;+ 26 Paakapa mvura inonaya murau,+Uye gore redutu rinotinhira nzira yaro, 27 Ndipo paakaona uchenjeri, akataura nezvahwo;Akahugadzira, akahuongororawo. 28 Akati kumunhu,‘Tarira! Kutya Jehovha—ndihwo uchenjeri,+Uye kubva pane zvakaipa ndiko kunzwisisa.’”+